जेठ महिनामा उन्नाइस महिलाको हत्याः अट्ठाइस बलात्कृत |
जेठ महिनामा उन्नाइस महिलाको हत्याः अट्ठाइस बलात्कृत
प्रकाशित मिति :2016-06-30 14:59:53
काठमाडौं । जेठ महिनामा १९ जना महिलाको हत्या भएको एक अनुगमनले देखाएको छ । सञ्चारिका समूह नेपालले गत जेठ महिनामा गरेको सञ्चार अनुगमनका अनुसार महिलाको हत्या गर्ने सवैभन्दा धेरै १२ जना परिवारका सदस्य रहेका थिए । सबैभन्दा बढी हत्याका घटना पश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रमा ११ जना भएको पाइएको समूहले जारी गरेका विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यसैगरी जेठ महिनामा २८ जना किशोरी तथा महिलाको बलात्कार भएको छ । बलात्कृत मध्ये ५ वर्षदेखि अठार वर्ष उमेर समूहका सवैभन्दा धेरै रहेका छन् । विज्ञप्ति अनुसार जेठ महिनामा पाँच वर्ष उमेरका ४ जना बालिका बलात्कृत भएका छन् । २८ मध्ये ३ वटा सामूहिक बलात्कार थिए । पीडकमा सवै भन्दा धेरै परिवार कै सदस्य रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसैगरि प्रहरी, निजामति कर्मचारी, झाँक्रीबाट समेत महिला बलात्कृत भएको पाइएको छ । विज्ञप्ति अनुासार सबै भन्दा बढी बलात्कार मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा आठ वटा र जिल्लाका आधारमा गोर्खामा ४ वटा रहेका छन् । महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसालाई ७ शीर्षकमा अनुगमन गरिएको समूहले जनाएको छ । जसमा बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, घरेलु हिंसा, दाइजो, हत्या, बहुविवाह, बोक्सी र स्वास्थ्यसम्बन्धी रहेका थिए ।
जेठ महिनामा स्वास्थ्य अधिकार उल्लघनका ७ वटा घटना भए । यीमध्ये ३ जना महिलाको घरमै बच्चा जन्माउने क्रममा अत्यधिक रक्तश्रावका कारण, तीनजनाको स्वास्थयकर्मीको लार्पवाहीका कारण अस्पातलमै ज्यान गएको थियो र एक जना महिलाको श्रीमानको कुटाईबाट गर्भपतन भएको थियो ।
जेठ महिनामा सञ्चारमाध्यमले महिला हिंसासम्बन्धी समाचारलाई दिएको स्थान सन्तोजनक रेहपनि धरैजसो समाचार भित्री पृष्ठमा छापिएको पाइएकोे समूहले जनाएको छ ।
यी समाचार सबै भन्दा धेरै पाचौँ पृष्ठमा छापिएका थिए । अनुगमनले महिलाहिंसाविरुद्धका समाचार लेखनमा पुरुष सहभागिता सकारात्मक भएपनि महिला लेखकको सहभागिता न्यून रहेकोे देखाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सञ्चारिका समूहले सञ्चारमाध्यममा महिला हिंसाका समाचार कति आएका छन् ? ती समाचारले कस्तो प्राथमिकता पाइरहेका छन् ? समाजमा के कस्ता लैंगिक हिंसा भइरहेका छन् र ती सम्बन्धमा कस्ता समाचार सामग्री आइरहेका छन् भनेर सञ्चार अनुगमन गर्दैआएको जनाएको छ ।